“Opération force de frappe”: voasambotra ry Rasta, mpanafika “cash point” | NewsMada
“Opération force de frappe”: voasambotra ry Rasta, mpanafika “cash point”
Par Taratra sur 21/07/2018
Nandritra ny hetsika “Opération force de frappe” no nahasamboran’ny polisin’ny Brigade Criminelle ny ekipan-dRasta, izay voalaza fa anisan’ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana sady mpampihorohoro ny fiarahamonina mihitsy. Ny fanafihana ireny « cash point » ireny no tena nahafantarana azy.
Manoloana ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, nisy ny “Opération force de frappe” izay atao eo anivon’ny « direction de la police judiciaire » entina hamongorana ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana mahery vaika sy mpampihorohoro. Tao anatin’izany no nahatrarana andian-jiolahy (lehilahy roa sy vehivavy iray) mpanao fanafihana mitam-piadiana, ny alarobia 18 jolahy 2018 lasa teo. Rasta sy ny ekipany ireto voasambotry ny polisy ireto. Araka ny fanazavan’ny polisin’ny BC, miisa efatra ireto andian-jiolahy ireto no miara-manao ny asa ratsiny ka noraisim-potsiny ny telo, raha tafaporitsaka nandritra ny fifanjevoana kosa ny iray tamin’izy ireo. Ry Rasta sy ny ekipany no tompon’antoka tamin’ny fanafihana “cash point” maromaro teto an-drenivohitra, izay sesilany tato ho ato ka anisan’izany ny “cash point” iray eny Ankazomanga, raha ny tatitra avy amin’ny polisin’ny BC hatrany. Nohamafisin’ny polisy hatrany fa mbola ry Rasta sy ny ekipany koa no tompon’antoka tamin’ny fanafihana tokantrano sy magazay lehibe iray eny Ankadifotsy, ny volana mey teo sy tamin’ity volana jolay ity. Lasan-dry zalahy nandritra ity fanafihana ity ny vola 17 tapitrisa Ar, ny ordinatera, ny moto, ny ampli,ny finday ary ny kojakoja maro samihafa. Nolazain-dRasta fa efa nifampizarana avokoa ny vola azo tamin’ity fanafihana ity ka samy efa nahazo 5 tapitrisa Ar isany avy, izy ireo.
Manendaka rehefa tsy manafika…
Tao ireo nividy moto tamin’ireo vola halatra, nisy kosa nividy tany any Ambatondrazaka. Ny an-dRasta efa nanaovany fiainana sy nividianany labiera ny anjara volany rehetra, araka ny filazany nandritra fanadihadian’ny polisy. Tratra tany amin’izy ireo nandritra ny fisamborana azy ireo ny basy PA iray sy antsilava fitondran-dry zalahy manao ny asa ratsiny. Nanambara ny iray amin’ireto jiolahy ireto fa rehefa tsy manao fanafihana mitam-piadiana ry zalahy dia manao sinto-mahery sy asa fanendahana eny Antanimena sy Vasakaosy ary Antohomadinika. Isan’ny faritra mena amin’ny asan-jiolahy rahateo eo amin’ny fiantsonan’ny taxi-be eo Antanimena, indrindra koa eo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy mankany Mahitsy. Maro ireo efa nitondra faisana tamin’ireo jiolahy ireto.
Nilaza ny polisy fa tsy hitsahatra ity hetsika “Opération force de frappe” ity fa hitohy hatrany. Tao anatin’ny telo volana, maro ny vokatra azon’ny polisin’ny BC, toy ny fahatrarana jiolahy ampolony maro, ny fiarakodia sy moto halatra ary indrindra ireo basy mahery vaika.